Farmaajo oo amar dul-dhigay XFS xili la xusayo musiibadii 14-ka October
Farmaajo oo amar dul-dhigay xukuumadda federaalka ah xili la xusayo musiibadii 14-ka October
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxtooyadda Qaranka ayaa waxay baahisay fariin qoraal ah oo ka timid madaxweyne Farmaajo kuna saabsan xasuuqii 14-ka October 2017-dii.
Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa faray xukuumadda federaalka ah in laga warqabo dhammaan muwaadiniintii lixaadkooda ku waayey falkan banii’aadamnimada ka baxsan.
Hoos ka akhriso fariinta
Qof kasta oo Soomaaliyeed waa uu xasuusan yahay dareenkii muragada lahaa ee ka dhashay weerarkan bahalnimada ah ee argagixisadu ay ku bartilmaameedsadeen shacabkeenna.
Si la mid ah taas waxaa muhiim ah in aan xasuusanno midnimadii, gurmadkii iyo sida dhammaan dadkeenna Soomaaliyeed ay ugu wada istaageen wax u qabashada shacabkeennii ay dhibaateeyeen cadawgu.
Tan iyo wakhtigaas Dowladdu waxa ay xoojisay hawlgallada qorsheysan ee lagaga hor-tegayo falalka waxashnimada ah ee ay soo qorsheeyaan argagixisada Alshabaab.
Waxa ayna geesiyaasheenna Ciidamada Qalabka sida burburiyeen saldhigyo cadawgu ay ka soo maleegi jireen weerarrada arxan darrada ah, sidoo kalena waxay ciidanku ka xoreeyeen deegganno ay cadawgu ku dhibaateeynayeen muwaadiniinteenna ku nool.
Soomaaliya: Ibraahim Iidle oo xilka wareejiyay, eedeyna u jeediyay DFS
Soomaliya 03.06.2018. 16:12